लगानी सम्मेलन र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको महापहाड ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७५, सोमबार १६:४१
सम्झौता गर्न नडराएको होइन, डराएर सम्झौता गरिरहेको सरकारी निरिहता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न र कामचोर तथा भ्रष्ट मन्त्रीहरूलाई हटाउन तीनपटक कोशिश गर्दा पनि सकिरहेका छैनन् । पहिलोपटक, सरकारले ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको बेला उनले यस्तो प्रयास नगरेका होइनन् । उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीहरूको मार्कसीट बनाउँदै हुनुहुन्छ ।” यसको अर्थ हुन्छ, ‘मार्कसीट’मा फेल देखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने ।
प्रधानमन्त्री आफ्ना भाषणमा “ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्, सरकारले लगानीको सुरक्षा र संरक्षण दिन्छ” भन्छन्, तर ५५ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्न आएको नाईजेरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘डाङ्गोटे’ ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर हेरेपछि यहाँ नअल्मलिनु नै कल्याण देखेर भाग्यो । भारतको रिलायन्स् ग्रुपको पनि त्यस्तै हालत भयो ।
कागजबिहिन क्याबिनेट बैठक बनाउने सिलसिलामा सबै मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप बाँडेपछि प्र.म.ले नै भनेका हुन्, “काम गर्न नसक्ने मन्त्रीजीहरू यही ल्यापटप लिएर यहाँबाट बिदा हुनुहुनेछ भन्ने अहिलेदेखि नै बुझिराखौं ।” सत्तारुढ ‘ने.क.पा.रुपी जेटका डबल पाईलट’ प्रचण्ड बारम्बार भनिरहेका छन्, “अब मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर हुन्छ……” मानौं मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरेर आफूले नचाहेका मन्त्री फाल्न प्र.म. ओलीलाई भन्दा उनलाई बढी ब्यग्रता छ । चैत २ गते पत्नी सीताको पार्किसन्स् रोगको सघन उपचार गर्न दलबलसहित अमेरिकातर्फ लाग्नु अघि पनि उनले बारम्बार यसै भन्दैथिए । यही चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपालमा गर्ने तयारी भइरहेको बेला भइरहेका मन्त्रीहरू कता हटाउने भनेर स्थगित भइरहेको बुझिन्छ ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा विदेशीहरूले १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपालमा गर्ने भन्ने घोषणा गरेका थिए । भारतको भन्दा चीनबाट धेरै लगानी आउने घोषणा पनि थियो, तर सुको पैसा भित्रिएको भए मार्दिनु ! अहिले त हालत यति गएगुज्रेको भइसक्यो कि यो लगानी सम्मेलन पनि कुनै दाताले गरिदिए हुने, नत्र अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भन्ने सुचना सुन्नुप¥यो भने अनौठो नहोला । प्रधानमन्त्री आफ्ना भाषणमा “ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्, सरकारले लगानीको सुरक्षा र संरक्षण दिन्छ” भन्छन्, तर ५५ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्न आएको नाईजेरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘डाङ्गोटे’ ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर हेरेपछि यहाँ नअल्मलिनु नै कल्याण देखेर भाग्यो । भारतको रिलायन्स् ग्रुपको पनि त्यस्तै हालत भयो ।
ती दुई विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी किन भागे ? दुनियाँमा सबभन्दा धेरै किसिम र तहका करारोपण भएको मुलुक नै नेपाल हो, जहाँ मरेको बाख्रीबाट पनि कर असुल गरिन्छ भन्ने भोगाई आमजनतामा परिसकेको छ । लगानीका लागि आवश्यक श्रमशक्ति नै वैदेशिक रोजगारीका नाममा देश छोडेर हिँडिरहने क्रम रोकिएको छैन भने लगानीको सफलता के आधारमा हुन्छ ? नेपालमा लगानी अनुमतिका लागि यति लामो प्रक्रिया छ कि लगानीकर्ताले युद्धस्तरमा आफ्नो कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि कम्तिमा ३ वर्ष लाग्छ । १३ वटा निकाय पार गर्नुपर्छ तर ४२ किसिमका ब्यवधान भएको लगानीकर्ताले पहिल्याएका छन् । ती ब्यवधानले लगानीकर्तालाई तर्साएर भगाउँछन् ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साएर भगाउने अनेकौं बदनाम बुख्याँचा छन् । एनसेल पूँजीगत लाभकर , ट्रलिकाण्ड, कर फस्र्योट आयोग (चूडामणि शर्मा चरित्र) को अनियमितता, आयल निगममा गोपाल खड्काले जग्गा खरिदका नाममा मच्चाएको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार र अन्य मनपरि, बुढीगण्डकी सुटुक्क चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा’ लाई जिम्मा लगाएको जालसाँजी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुनलाग्दा इटलियन कम्पनीसँग ३५ करोडको सौदावाजी गर्न खोज्दा मिलिभगतमा काम छोडाएर भगाइएको काण्ड देखेका लगानीकर्ता यस्ता फोहोरी आर्थिक गतिविधिमा किन फस्न आउन ?
विश्व बैंकको लगानी रणनीति तथा उसकै समन्वयमा भएको बाह्य साझेदारहरूको लगानी सम्मेलनमा यसअघि पनि बारम्बार यो शर्त आइरहेको छ, सुशासन दिए लगानी बढ्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्ने भाषामा भनिरहेका छन्, तर के गर्दा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भनी बुझेको सरकार त्यतातिर कुनै इच्छाशक्ति देखाउँदैन । सन् १९९४ को सय दिनमा ८ मानिसको नरसंहार भएको र गृहयुद्धले तहसनहस भएको अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डामा आज बाह्य लगानीलाई यति सुविधा दिइएको छ कि लगानीका लागि आवेदन दिएको ५ घन्टाभित्रमा सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा हुन्छ । अर्थात बिहान जेट चढेर त्यो मुलुकमा आएको विदेशी लगानीकर्ता दिनभरिमा आफ्नो काम सकेर बेलुकी स्वदेश फर्किन सक्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साएर भगाउने अनेकौं बदनाम बुख्याँचा छन् । एनसेल पूँजीगत लाभकर , ट्रलिकाण्ड, कर फस्र्योट आयोग (चूडामणि शर्मा चरित्र) को अनियमितता, आयल निगममा गोपाल खड्काले जग्गा खरिदका नाममा मच्चाएको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार र अन्य मनपरि, बुढीगण्डकी सुटुक्क चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा’ लाई जिम्मा लगाएको जालसाँजी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुनलाग्दा इटलियन कम्पनीसँग ३५ करोडको सौदावाजी गर्न खोज्दा मिलिभगतमा काम छोडाएर भगाइएको काण्ड देखेका लगानीकर्ता यस्ता फोहोरी आर्थिक गतिविधिमा किन फस्न आउन ? लगानीकर्ताले सरकारका खोक्रा आश्वासन सुनेर होइन यस्तो परिस्थितिलाई हेरेर आफ्ना निर्णय बनाउँछन् ।
‘पचास वर्ष शासन चलाउने’, ‘त्यो अवधिसम्म कांग्रेसले चिहाउनु पनि पर्दैन’ भन्ने ढोल–नगरा बजाउँदै आएको दुईतिहाई समर्थनको सरकारलाई ५ वर्ष धान्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको परिदृश्य हो वर्तमान अवस्था । बिखण्डनको अपराध बोकेको सीके राउतसँग सम्झौता गर्न पुगेको सरकार कतिसम्म समर्पणवादी भईसक्यो भन्ने बुझ्न यही घटना काफी छ । मिटर ब्याजका संरक्षक नवराज सिलवाल, रेशम चौधरी, दिपक मनाङ्गेजस्ता फौजदारी अपराधमा मुछिएका विवादास्पद सांसदहरूलाई संसदमा स्वागत गरेर उसको सम्झौतावादी चरित्र थप उदाङ्ग भएको छ । यस्ता अपराधीको संरक्षक भएको सरकार वैध लगानीको संरक्षक कसरी हुने हो, करिब दुईतिहाई समर्थन भएर पनि त्यो उपाय नहुँदा खुम्चिएको र स्खलित मनोदशामा हो ।
सत्तारुढ पार्टीभित्रको विग्रह, कलह विभाजित मानसिकताको बेग्लै कथा छ । बाँस फेदबाट चिरिन्छ, तर पार्टी टुप्पाबाट चिरिन्छ । माओवादीको खरिपाटी भेला र पालुङ्टार प्लेनमदेखि नै फुट्न गरेको कसरत आखिर पाँच चिरा भयो । एउटा चिरो एमालेभित्र पस्यो । तर अहिले त्यहाँ पनि फुट्ने दाउ हेर्दैछ । यी चिरामा टालटुलको जिम्मा डबल पाईलट अध्यक्षलाई दिइए पनि टालटुले समाधान र ढाकछोपे तर्कको के अर्थ रहला ! आकृतिमा सत्तारुढ ने.क.पा. एउटै देखियोस्, तर प्रकृतिमा यो भित्रभित्रै तीन टुक्रामा विभाजित भईसकेको छ । आकृति बोक्रो हो भने प्रकृति त्यसको अन्तर्वस्तु हो । अन्तर्वस्तुमै आधारभूत भिन्नता भित्रिसकेको पार्टीमा फुट त्यसैबाट शुरू हुन्छ, जसबाट सरकारको कार्यसम्पादनदेखि विदेशी लगानीसम्मलाई प्रभाव पार्दछ ।
अर्को माओवादीबाट उत्तिकै जोडदार रुपमा आइरहेको छ र त्यस्तो नक्कली माओवादीको मुखियालाई ‘सफाया गर्ने’ तयारीमा लागेको बताइएको छ । यस यथार्थलाई पुष्टि गर्दै सिन्धुपाल्चोक घर भएका एक लडाकु कमाण्डर देवी ढकाल ऊर्फ ‘रवीन्द्र’ले बताए, “……शहिद परिवार खान नपाएर रूवावासी गरिरहेका छन् । तर हाम्रो नेतृत्वमा बसेका कमरेडहरू विदेशी रक्सी खाएर राम रमिता गरिरहेका छन् । ………..यी नेतालाई कसले कोर्टमार्शल गर्ने ? यी नेतालाई बन्दुकको म्याग्जीनमा कतिवटा गोली जान्छ, थाहा छ ? लौ सोधी हेर्नुहोस् त यिनलाई त्यो कुरा थाहा छ ?”
एउटा माओवादीको एमालेकरण भइसकेको र यसका अध्यक्षको रहनसहन, चालचलन र जीवनशैली बुर्जुवा नेताको जस्तै भइसकेको, पार्टीको हिसाबकिताब पारदर्शी नबनाउनुका साथै हिनामिना गरेको जस्ता गम्भीर आरोप त्यहीँभित्रबाट मात्र होइन, अर्को माओवादीबाट उत्तिकै जोडदार रुपमा आइरहेको छ र त्यस्तो नक्कली माओवादीको मुखियालाई ‘सफाया गर्ने’ तयारीमा लागेको बताइएको छ । यस यथार्थलाई पुष्टि गर्दै सिन्धुपाल्चोक घर भएका एक लडाकु कमाण्डर देवी ढकाल ऊर्फ ‘रवीन्द्र’ले बताए, “……शहिद परिवार खान नपाएर रूवावासी गरिरहेका छन् । तर हाम्रो नेतृत्वमा बसेका कमरेडहरू विदेशी रक्सी खाएर राम रमिता गरिरहेका छन् । ………..यी नेतालाई कसले कोर्टमार्शल गर्ने ? यी नेतालाई बन्दुकको म्याग्जीनमा कतिवटा गोली जान्छ, थाहा छ ? लौ सोधी हेर्नुहोस् त यिनलाई त्यो कुरा थाहा छ ?”
प्रचण्डकै पक्षमा भएका तर ‘विप्लवको भाषा’ बोल्ने एक पूर्वलडाकुले त यतिसम्म भने “अब फेरि हतियार उठाउनु प¥यो भने पहिलो म्याग्जीनको गोली हाम्रै नेतृत्व कमरेडतिर तेर्सिन्छ, अनि अरू म्याग्जीनका गोली रणनीतिक निर्णय अनुसार हुनेछ ।”
सत्तारुढ दलका ‘दलाध्यक्ष’ र सरकारको काम गराईको यस्तो हालत भएको अवस्थामा कताबाट बढ्ने बाह्य लगानी, कसरी बढ्ने निर्यात ब्यापार, कसरी मिल्ने रोजगारी ? जनआन्दोलनपछिको अवस्थाले जनआन्दोलनकारीलाई खाइरहेको यो नै टडकारो उदाहरण हो ।